इस्लामिक स्टेटले नियन्त्रण गरेको भूभागलाई चाँडै पूर्ण रुपमा मुक्त भएको घोषणा गरिने : राष्ट्रपति ट्रम्प
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिरिया र इराकमा इस्लामिक स्टेटले नियन्त्रण गरेको भूभागलाई चाँडै पूर्ण रुपमा मुक्त भएको घोषणा गरिने बताएका छन् । ट्रम्पले अर्को सातासम्म यस्तो घोषणा हुनसक्ने
डेभिड माल्पास विश्व बैंकको नयाँ अध्यक्षमा सिफारिस
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अर्थ विभागमा कार्यरत डेभिड माल्पासलाई विश्व बैंकको नयाँ अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेका छन् । विश्व बैंकको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै आएका माल्पासलाई ट्रम्पले नियुक्तिका
विश्वकै चिसो सहर, जहाँ वर्षको नौ महिनासम्म हिउँ जम्छ
काठमाडौं । संसारमा ठाँउ अनुसार कतै धेरै गर्मि त कतै अत्यधिक चिसो हुन्छ । के तपाईलाई थाहा छ विश्वमा सबैभन्दा चिसो सहर पनि छ, जहाँ वर्षको नौ महिनासम्म हिउँ जम्छ
भेनेजुएला प्रकरणः तथ्य एक, चर्चा अनेक ! (भिडियोसहित)
भेनेजुएला प्रकरणः काठमाडौं । भेनेजुएलामा निवार्चित राष्ट्रपति निकोलस मदुरोविरुद्ध संसदमा बहुमत प्राप्त प्रतिपक्षी नेता गुआइदोले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे । त्यसको समर्थन र विरोधमा विश्वका अधिकांश देश कित्ताकाट भएका छन्
काठमाडौं । एप्पल मोवाइल फोन होस् वा अन्य उत्पादन युवा माझ लोकप्रिय मानिन्छ । एप्पलको ट्रेडमार्क अर्थात आधा स्याउ कसरी रहन गयो धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । यसको निर्माण कहिले
भेनेजुएलाका बारे नेकपा अध्यक्ष दाहालले बोल्नुको रहस्य
विनोद त्रिपाठी २०६१ सालको कुरा हो । बागलुङ थिएँ म । ति क्षणहरु मेरो पत्रकारिताका शुरुवाती दिनहरु थिए । तत्कालीन माओवादीले मलाई अपहरण शैलीमा बागलुङ बजार भन्दा धेरै माथि घोडाबाँधे
भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गरेमा ट्रम्पले रक्ताम्य हात लिएर ह्वाइट हाउस छोड्नु पर्ने राष्ट्रपति मदुरोको भनाई
काठमाडौं । भेनेजुएलाको राजनीतिक घटनाक्रममा विश्व ध्रुविकृत भएको छ । अमेरिकासहित अधिकांश दक्षिण अमेरिकी मुलुक आफूलाई राष्ट्रपति घोषित गर्ने विपक्षी नेता हुँवा गुएइदोको पक्षमा छन् । रूस, चीन, टर्कीलगायतले राष्ट्रपति
रातो खुर्सानीले अभिषेक गर्नुपर्ने अनौठाको मन्दिर
काठमाडौं । भगवानको मन्दिरमा अविर, केसरी र दुधले अभिषेक गर्ने गरिन्छ । तर, भारतको एक मन्दिरमा भगवानलाई खुर्सानीले अभिषेक गरिन्छ । दक्षिण भारत विचित्र मन्दिर र हिन्दू परम्पराका लागि चर्चित
भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटमा विश्व विभाजित, आरोप–प्रत्यारोप पनि
अपराधीको पनि पूजा ! सुन्दा अचम्म लाग्छ । तर, ल्याटिन अमेरिकी देश भेनेजुयलामा अपराधिलाई पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ । ह्युगो चाभेजको नेतृत्वमा कुनै समयमा अमेरिकालाई चुनौती दिएको यो देश